TIKA oo Soomaaliya kahirgalisay Shaybaarka Agabka Dhismaha - Tilmaan Media
TIKA oo Soomaaliya kahirgalisay Shaybaarka Agabka Dhismaha
Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflad xarigga looga jaray Shaybaarka Qalabka Dhismaha. Shaybaarkaan ayaa waxaa kuliyadda injineeriyada ee Jaamacadda Muqdisho ka furtay hay’adda TIKA oo İskaashiga iyo Hormarinta Dibadda uqaabisan dowladda Turkiga.
Shaybaarkaan oo ah kii ugu horeeyay noociisa oo Somaaliya laga furo ayaa wuxuu ka kooban yahay 5 qeybood oo kala ah; biyaha, carrada, shubka, birta iyo laamiga.
Xafladda tijaabada shaybaarka waxaa kasoo qayb galay wufuud heersaraysa oo uu kamid yahay Mohamed Aadan Macallim oo ah Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud Dib-udhiska Guryaynta, Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Amassador Mehmet Yilmaz, İsku xiraha hay’adda TİKA ee Soomaaliya Galip Yilmaz iyo madaxa tacliinta sare ee Wasaaradda Waxbarashada dhaqanka tacliinta sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa xafladda joogay Dr.Ali Sheikh Ahmed oo ah gudoomiyihii hore ee Jaamacadda Muqdisho haddana ah Gudoomiyaha Hay’adda Bariga Afrika ee Cilmi-baarista iyo hormarinta (DAD).
Shaybaarkaan ayaa dabooli doona baahida loo qabo baaritaanka walxaha loo adeegsado dhismaha, waxayna meesha kasaaraysaa dhibaatadii lagala kulmi jiray baaritaanada dhismaha, sidoo kale arintaan ayaa yaraynaysa khatarta laxiriirta dhisidda guryo aan amni ahayn. Dhanka kale waxaa hoos u dhacaya kharajka lagu bixin jiray walxaha dhismaha oo dibadda loo diri jiray si loo soo baaro arintaan oo waxtar uleh dadka guryaha dhisanaya iyo shirkadaha dhismaha.
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmet Yilmaz ayaa sheegay in Turkigu caawimadii bini aadan nimo ee uu Soomaaliya ufidin jiray yaraynayo loona gudbay iskaashi hormarineed oo labada dal dhex mara. Sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud Dib-udhiska Guryaynta Mohamed Aadan Macallim ayaa sheegay in ay wasaaraddu si dhaw ula shaqaynayso waaxda shaybaarka ee Jaamacadda Muqdisho si loo hubiyo nabad qabidda dhismayaasha la samaynayo.
Dagaal culus oo kadhacay deegaanka Bacaadweyne ee G/Mudug